Sidee looga mira dhalin karaa isbedelkaan filan waaga ah? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Sidee looga mira dhalin karaa isbedelkaan filan waaga ah?
15/09/2012 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa hubanti ah, maantana la wada qirsan yahay in uu dalka soomaaliya uu galay xilli taariikhi ah oo runtii rajo badan geliyay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka uga nool yihiin. Isbedelka noocaan ah oo aan weli soo marin ummadda Soomaaliyeed muddo 22 sano ah ayaa waxaad u maleysaa inuu meelo badan uga eg yahay isbedello labo jeer oo hore soo maray dalka.
In kasta oo ay aad u xanuun badan tahay, dad badanina ay jecel yihiin in laga tiro taariikhda ummadda Soomaaliyeed, ayaa hadana waxaan la hilmaami karin isbedelladii aan loo diyaar garoobin oo ay ugu horeeysay kii ay ku burburtay dowladdii militeriga aheyd ee dalka ka talin jirtay labaatankii sano ee burburkii dalka ka horeysay. Sidii fududeyd oo ay dowladaasi ku burburtay iyo weliba iyada oo aysan dhisneyn wax iyadii bedela ayaa ah waxa uu dalku ku galay isqabqabsi ugu danbeyntiina dhaxalsiisay dadka Soomaaliyeed taariikhda mugdiga ah ee aynnu wada naqaanno.
Waxaa kaas ka danbeeyay isbedelkii taariikhiga ahaa ee ka dhashay markii magaalada muqdisho laga saaray dagaal oogayaashii, oo ay la wareegeen midowgii maxkamadaha, iyaga oo aysan jirin wax u diyaarsan, dad badanina ayba ku xamanayeen inay sagaaro dabanayeen laakiin uu biciid siriqda ugu dacay. Runtiina ay halkaas kala kulmeen wax ka weyn wixi ay filayeen. Sida lawada ogsoon yahayna ay ku fashilmeen inay suurta geliyaan rajadii laga qabay, inay dalka xasilooni ku soo celiyaan, taasoo ay badanaa sabab u aheyd qorsho la’aanta ay markii horaba ay howsha ku galeen. In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo loo aaneeyo fashilka ku yimid midowgii maxkamadaha, hadana midka ka yimid qorsho la’aantooda ayaa soo dedejiyay wax kasta oo la dhihi karo qeyb ayuu ka qaatay fashilkoodii.
Isbedelka maanta ka dhacay dalka Soomaaliya waxa uu aad ugu muuqdaa mid dadka badankiisu aysan wada filaynin, oo doorashada madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud, waa mid qof kasta oo aad weydiiso uu ku lee yahay cidina ma filaynin. In kasta oo maamulka uu dhaxlayo uu aad uga sareeyo ugana hufan yahay marka loo fiiriyo xaaladdii ay dhaxleen midowgii maxkamadaha markii ay magaalada ka saareen dagaal oogayaashii, hadana, waxaan la inkiri karin dhaawaca ay maamulkaan ugubka ah ay u keeni karto filanwaaga uu kaga guulaystay maamulkii ka horeeyay.
In kasta uu madaxweynuhu baarlamaanka uu ka hor aqriyay qorshahiisa siyaasadeed iyo weliba waxyaabaha uu aaminsan yahay inay dhalin karaan nabad gelyo iyo horumar waara, ayaa hadana waxaan la ogeyn sida ama qaabka uu rabo inuu u hirgeliyo qorshayaalkaas qiimaha badan leh.
Waa marka horee, waxaa la wada ogsoon yahay, in uu dalku lee yahay qaab aad u guran oo lagu sheego inuu yahay awood qeybsi oo ku salaysan 4.5, kaas oo keena in dad tayo badan ay ku waayaan xilkii ay ku fiicnaayeen, maadaama qof ku heyb ahi uu haayo masuuliyaddii loogu talo galay haybtaas, halkaasna ay ka dhalato inaan qofkii tayada lahaa aan loo dhiibi karin xilka uu ku haboon yahay. Taasina waxa ay noqon doontaa caqabad yareysa xubnaha uu madaxweynuhu u xulan karo xilka mraisulwasaare.
Si loo hirgeliyo siyaasadda uu ku gaari lahaa madaxweynuhu qorshooyinka siyaasadeed oo uu balan qaaday, waxaa lagama maarmaan ah inuu doorto, raisulwasaare la jaan qaadi kara siyaasaddiisa si looga hortago isfahanwaa dib u dhac ku sameeya isbedelladda dalku u baahan yahay, oo aan marna suuroobaynin haddii madaxda dalka ay soo kala dhex gasho isqabqabsigii 12ka sano ay ku caanka baxeen maamuladdii dalka ka soo shaqeeyay, oo iyagu hormuudka u noqday tayo la’aanta dowladihii tan ka horeysay.
Waxaa badanaa diiradda la saaraa yuu noqon doonaa qofka hogaamin doona dowladda cusub, iyada oo la iska hilmaamo waxa looga baahan yahay qofka qaban doona xilkaas, oo run ahaantii ay ku xiran tahay hirgelinta mashaariicda horumarineed ee uu balan qaaday Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud.
Si looga hortago fashil ku yimaada isbedelkaan filan waaga ah, waxaa lagama maarmaan ah in loo fikiro sidii loo fikiri jiray si ka duwan laguna dhiiranaado waxyaabo badan oo horay aan loo sameynin, waayo haddii mar kasta wax lagu wado sidii wax loo sameyn jiray waxaa halis loogu jiraa in wax isbedel ahi uusan imaanin. Waxaa lagama maarmaan ah in qaab siyaasadeed cusub lagu dooro qofka xilkaas qabanaya, waana inuu madaxweynuhu sameeyo taxadar aad u weyn si uu qofka uu dooranayo uu u noqdo qof ay isku aragti yihiin ayna adag tahay in labadooda la kala soo dhex galo oo halkaas khilaaf ka dhasho.
Marka laga yimaado waayo aragnimada iyo weliba aqoonta hogaamin iyo maamul oo uu lee yahay qofka loo dooranayo xilka raisul wasaare waxaa lagama maarmaan ah inay wada shaqeyn toos ah ama mid aan toos aheyni ay soo dhex martay isaga iyo madaxweyne Xassan inta uu xilkaan qabannin. Waxaana weliba haboon inuu ka yimaado dadkii la shaqeynayay lana soo dhisay guusha uu madaxweynuhu maanta uu gaaray. Sababta aan taas u lee yahay ma aha inaan garanaayo dadka howshaan filan waaga ah ka soo shaqeeyay balse waa in laga badbaado in wax la isugu daro dad aan wax fikrad ah aysan ka dhaxeynin, oo ay markaas labo jiho kala aadaan halkaasna lagu dayaco fursaddii qaaliga ahaa ee u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Haddii la waayo si kasta oo ay u dhacdaba, waa in qofka la dooranayo uu noqdaa qof ay aad ugu weyn tahay wada shaqeynta dareemina kara horumarka ay keeni karto wada shaqeyntu, wax kastana ku sameeya wada tashi.
Waxa ay dad badani qabaan in madaxweynuhu uu u magacaabo xilkaan qof ay dadka Soomaaliyeedi ku kalsoon yihiin amaba qof lagu qancinayo shaqsiyaad la is lee yahay amay ka horyimaadaan isbedelka haddii iyaga la siin waayo waxa ay rabaan? In kasta oo laga yaabo in taasi ay walwal badan ku abuurto madaxda howshaan ku jirta hadana waxaa haboon inay fiiriyaan in taasi ay horay noogu shaqeyn weyday oo marar badan oo la isku dayay, ay miro dhal noqon weyday keentayna ugu danbayntii fashil ballaaran oo ku yimaada dowladdii jilicsanayd. Hadaba si taas looga badbaado waa in uu madaxweynuhu ku adkeystaa doorashada qof ay isku siyaasad yihiin haddii uu rabo ha ka yimaado dadka isaga la tartamay laakiin waa in magacaabidda qofkaas uusan madaxweynuhu ku qancinin dad kale uuse ka fiiriyaa sida uu u hirgelin karo isbedellada laga wada filayo.
Guntii iyogabagabadii waxaan shaki ku jirin in Madaxweynaha cusub laga filaayo wax ka weyn wixii ay qabatay dowladdii uu madaxweyne Sh. Shariif madaxweynaha ka ahaa, waxaase ay wax badani ku xiran yihiin qofka uu u doorto xilka raisulwasaare iyo weliba waxyaabaha uu ku dooro qofkaas. Waxaanse ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u soo jeedinayaa in ay dowladdooda la shaqeeyaan oo ay weliba hiil iyo hooba la garab istaagaan. Waa inay saxaan marka ay sixidda u baahan tahay waana inay adeecaan marka ay u baahan tahay in la adeeco. Waa inay weliba aad uga fiirsadaan wax kasta oo fududeen kara inuu sii socdo mugdigii siyaasadeed oo uu dalku ku soo jiray. Qof kasta oo Soomaali ah ayuu xil ka saaran yahay sidii ay u horumari la heyd dowladaani waana inaynu ka digtoonaayo ficilka ah,( maxaa iigu dhex jira?) oo ah ficilka horumarka u diiday ummada Soomaaliyeed.
Ilaahey waxeynu ka baryeynaa inuu madaxdeenna uu xaqqa tuso, la taliyaalna uu ilaahey uga dhigo kuwo cadaaladu ku weyn tahay oo xaqqa kula taliya. Waxaan ilaahey ka baryeynaa inuu Madaxda dalka uu fahansiiyo xaqqa ay ummaddu ku lee dahay iyo weliba sida ay u gudan karaan xilkooda. Wax uusan ilaahey fududeen ma fududaadaane ilaahey ha u fududeeyo xilka ay qaadeen.
Posted in Maqaallo. 1 Comment »
One Response to “Sidee looga mira dhalin karaa isbedelkaan filan waaga ah?”
President Hassan must avoid Faroole deception first,then any external perssure. If he witness those two option and make his own free will nomination thsi will send a clear message to all decitful henious evil wisher to Somalia
« Dal Tabyo, dood ku saabsan doorashooyinka madaxweynaha.
MUDANE MADAXWEYNE GUUSHAADA WAXAY KU XIRAN TAHAY TILAABTA KOOBAAD EE AAD QAADO? »